Waa Kuma Xiddiga Muhiimka U Ah Shaxda Frank Lampard Ee Chelsea Dhaawaca Uga Soo Laaban Doona Kaddib Kulamada Caalamiga Ah? - Gool24.Net
Kooxda Chelsea ayaa halkeeda kasii waday qaabka wanaagsan ee ay isku soo muujinaysay toddobaadyadii ugu dambeeyay kaddib guul kale oo weyn oo ay ka gaadheen kooxda Southampton toddobaadkan.
Blues ayaa haatan fadhiya booska shanaad ee miiska kala sarreynta Premier League waxaana ay farqiga goolasha kaga dambeeyaan kooxda booska afraad ee Leicester City oo ay min 14 dhibcood wadaagaan.
Dabcan maaha wax yar in haatanba hoggaanka lagaga hayo tobban dhibcood balse natiijooyinka soo wanaagsanaanayay toddobaadyadii ugu dambeeyay ee ay samaynayaan ayaa niyad wanaagsan ku abuuraysa taageerayasha kooxdaas.
Si kastaba, Warka kale ee u wanaagsan dhagaha jamaahiirta kooxdaas ee haatan soo yeedhay ayaa ah soo kabashada daafaca dhexe ee kooxdooda ee Antonio Rudiger kaas oo kasoo kabanaya dhaawac gumaarka ahaa.
Rudiger ayaa xilli ciyaareedkan intiisa badan ku seegay dhaawacyo iyadoo midka ugu dambeeyay ee gumaarka ahaa uu ku qasbay inuu lix kulan oo xidhiidh ah maqnaado.
Haatn wariye Simon Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in kooxda tababare Frank Lampard ay ku niyad wanaagsan tahay in 26 jirkan daafaca dhexe ee kooxdeedu uu diyaar noqon doono kaddib kulamada qaramada.
Warkaas ayaa soo jeedinaya inuu kasoo muuqan doono kulanka ay Chelsea 19-ka bishan October qaabilayso Newcastle United balse wakhtiga ayaa sheegi doona haddii ay u ansixiyaan shaqaalaha caafimaadka ee kooxdiisu.